BB Gabar baan ahay balse booliska Soomaaliya waxay dhaheen wiil baa tahay” | Biyoguurenews.com
Home Wararka BB Gabar baan ahay balse booliska Soomaaliya waxay dhaheen wiil baa...
BB Gabar baan ahay balse booliska Soomaaliya waxay dhaheen wiil baa tahay”
Magaalada Muqdisho waxa maanta ka dhacday sheeko la yaab leh ka dib markii boolisku ay xireen gabadh ay uga shakiyeen inay nin tahay, xili ay baaritaan ka wadeen bar koontarool oo ku taala degmada Boondheere.
BBC-da ayaa wareysi la yeelatay gabadhan waxayna noo sharraxday sida ay wax u dhaceen, iyadoo sheegtay in waqtiga la qabanayay ay kasoo baxday gurigeeda.
Faa’iso Cabdi Maxamed ayaa sheegtay in askari boolis ah uu ka dajiyay mooto bajaaj ay saarnayd ka dibna uu ku amray inay furto indha shareer ay xirnayd, markii ay furtayna wuxuu askarigu u sheegay inuu uga shakiyay inay nin tahay oo saacadaas laga bilaabayna ay xiran tahay.
Gabadhan ayaa sida ay noo sheegtay markii dambe waxaa la geeyay saldhiga, halkaas oo baaritaan iyo waraysiba looga qaaday, ugu dambeyntiise waa la sii daayay.
“Askarigii bajaajta baarayay wuxuu igu amray inaan indhashareerka iska furo, ka dib wuxuu igu arkay shaarbo uu Alle ii dhaliyay oo igu yaalla, wuxuu igu amray inaan soo dago, wuxuuna ii sheegay in la iga shakiyay oo aan xilligaas wixii laga billaabo xiranahay”, ayey tidhi Faisa.
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey sheegtay in ay aflagaaddo iyo handadaad kala kulantay gabar askariyad ah oo aan labis xirneyn taasoo laga dalbaday inay saldhigga ku baarto.
“Taliyihii aan saldhiga ugu tagnay ayaa magaceyga i weydiiyay, markii aan u sheegayna wuxuu yiri ‘tan waa qurbajoog nin ah oo diyaarsan’, gabadhii booliska ahayd ee i baareysay waxay igu amartay inaan dharka iska siibo laakiin waan ka diiday”.
Waxay sheegtay in markii dambe uu saldhiggii yimid askari waayeel ah oo taliskii u sheegay in ay caddahay inay gabar tahay ayna mudanahay in la sii daayo isla markaana la raalligaliyo.
Faisa ayaa sheegtay in horay aysan ciidamada dowladda ugu xad gudbin balse ay marar kale dad shacab ah iyadoo waddooyinka socota ku faduuliyeen shaarbaha ay leedahay, markaasoo ay ku tilmaamayeen inay nin tahay.
Waxay BBC-da iyo booliskaaba u sheegtay in ay ka shaqeyso hay’ad ka howl gasha dhinaca arrimaha bani’aadanimada.
Previous articleSiyaasiyada faadumo siciid oo Afka Furatay Sir iyo caadna Uga hadshay
Next articleBBC Madaxweynihii Algeria oo is casilay